ဗိုက်ချပ်ပြီး ဝိတ်ကိုထိန်းပေးမဲ့ မနက်စာကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ? – Sunthit Myanmar
ဗိုက်ချပ်ပြီး ဝိတ်ကိုထိန်းပေးမဲ့ မနက်စာကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ?
ဗိုက်ပူမှာစိုးလို့ ဟိုဟာလည်း မစားရဲ၊ ဒီဟာလည်း မစားရဲ ဖြစ်နေရလား? လေ့ကျင့်ခန်းလည်း ပုံမှန်မလုပ်နိုင်တာကြောင့် ဗိုက်ပူမှာစိုးရိမ်ပြီး အစားလျော့ဖို့ စဉ်းစားနေရသလား? ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့။ သင့်ဗိုက်မှာ အဆီပိုတွေကင်းဝေးပြီး ချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်နေစေမယ့် မနက်စာရှိပါတယ်။
ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ မနက်စာကိုစားပါ။ မနက်စာမှာ ပရိုတင်းပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကို စားသုံးတာက ဆာလောင်ခြင်းကို လျော့နည်းစေတဲ့အပြင် ဝမ်းဗိုက်မှာ အဆီတွေစုခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
မနက်ခင်းမှာ အိပ်ရာနိုးတာနဲ့ Green Tea တစ်ခွက်သောက်လိုက်ပါ။ Green Tea က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အပြင် အဆီပိုတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။
မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ကြက်ဥစားပေးပါ။ ကြက်ဥမှာ ဗီတာမင်D နဲ့ B12 ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆီပိုတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ကြက်ဥစားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ကြက်ဥမှာပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်က ဆာလောင်မှုကို လျော့နည်းစေတာကြောင့် အစားအများကြီး စားဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကလည်း အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိရှိတဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တာကြောင့် ဟင်းနုနွယ်ရွက်ကိုလည်း မနက်စာစားတဲ့အခါ ထည့်သွင်းစားသုံးသင့်ပါတယ်။
နွားနို့ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အဆီပိုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အပြင် အရိုးတွေကိုသန်မာစေတာကြောင့် မနက်ခင်းတိုင်းမှာ နွားနို့တစ်ခွက်တော့ သောက်သင့်ပါတယ်။
Categorized as Food, Lifestyle Tagged ဗိုက္ခ်ပ္ျပီး ၀ိတ္ကိုထိန္းေပးမဲ့ မနက္စာကဘယ္ဟာျဖစ္မလဲ?